Headline Nepal | सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कस्तो छ लोकसेवाको तयारी ?
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कस्तो छ लोकसेवाको तयारी ?
३० असोज,काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
सर्वोच्चले यो आदेश दिएपछि लोकसेवा आयोगले छलफल गर्ने भएको छ । आयोगले आगामी सोमबार छलफल गरेर थप निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशपछि लोकसेवा आयोगले अब बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आयोगले जारी गरेको सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको बुँदा नम्बर८(१) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ । यो बुँदामा परीक्षार्थीले आफू कोभिड-१९ सङ्क्रमित भए नभएको स्वयम् घोषणा गर्नुपर्ने तथा सङ्क्रमित परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।